एमाले सांसद प्रेम आले वचनका पक्का ! | Sudur Press
एमाले सांसद प्रेम आले वचनका पक्का !
धनगढी– केपी शर्मा ओलीको साथ छाडेर शेरबहादुर देउवातिर लागेका एमाले सांसद प्रेम आले वचनका पक्का ठहरिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा आइतबार शेरबहादुर देउवाको पक्षमा आफूसहित ८ एमाले सांसदलाई उभ्याएपछि पूर्व वनमन्त्री आलेलाई काँग्रेस नेताहरुले ‘वचनका पक्का’ ठहर्याएका हुन् ।
तर, आफूले सहयोग गरेवापत प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई पर्यटन मन्त्री बनाउनुपर्ने आलेले माग गर्दै आएका छन् । देउवाले यसबारे माधव नेपालसँग कुरा मिलाउन भनेको खबर सार्बजनिक भएको छ ।